न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ बैशाख ४ मंगलबार |
काठमाडौं, ४ बैशाख । गत साता सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ आईजीपी बढुवा नियुक्ति गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्रमा शैलेन्द्र खनालको नियुक्तिसँगै दुवै संगठनभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।
आईजीको फूली लगाएपछि दुवै प्रहरी प्रमुखले आफू मातहतलाई ब्रिफिङ दिँदै कडा चेतावनी दिएपछि संगठन भित्र र बाहिर खैलाबैला मच्चिएको हो ।
आईजीद्वय खनालले चेनअफ कमाण्ड भन्दा बाहिर जाने र आपराधिक गिरोहसँग साँठगाँठ गर्नेलाई संगठनमा ठाँउ नहुने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।
सिपाही हबल्दारको पिडाको बिषयमा दुवै संगठन प्रमुखले आफ्नो ध्यानआकर्षण गराएका थिए । प्रहरीका आईजी खनालले सिपाही हवल्दारलाई कारवाही गरेर उम्कने दिन गएको भन्दै हाकिमलाई सचेत हुन सुझाएका छन ।
सशस्त्रका आईजी खनालले रातभर बन्दुक भिररे जागराम भएर हाकिमलाई निद्रा दिलाउने सिपाही हवल्दारको सुबिधाको बिषयमा आफू गम्भिर भएको बताउँदै देशमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि आफूले प्रभावकारी ढंगले सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
खनालले देश, जनता र संगठनप्रति सधैँ वफादार र उत्तरदायी रही कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । संगठनलाई अझै मजबुत र नमूनाको रूपमा स्थापित गर्न सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू एक जुट भई सामूहिक भावनाका साथ अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै चेन अफ कमाण्ड, फौजी मर्यादा र अनुशासनमा रही हरेकले आफ्नो कार्यशैली, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदै कर्तव्य निर्वाहमा दत्तचित्त भएर नलागे कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने सुझाएका छन् ।
कोहीप्रति पूर्वाग्रह नराखी सबैलाई न्यायोचित तवरले वृत्तिविकास लगायतका संगठनका हरेक अवसर र काम–कारवाही पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नमा आफूले समेत कुर्नै कसर बाँकी नराख्नेमा सशस्त्र आईजी खनालले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
खनालद्वयको नियुक्तिसँगै दुवै संगठनका मै हुँ भन्ने हाकिमका निद हराम भएको छ । संगठनको प्रमुखको रूपमा व्यावसायीक छवि भएका प्रमुख पाएपछि सिपाही हवल्दार देखि जेहन्दार प्रहरी अधिकृत भने खुशी छन् ।
कर्मचारीको वृत्ति बिकासमा अब ठेस नपुग्ने अनुमान उनीहरूले गरेका छन् । चाकडी चाप्लुसी गर्ने तथा आर्थिक र राजनीतिक दबाब दिएर बढुवा र राम्रा पोस्टिङ खाँदै आएका प्रहरी अधिकृतका समेत निद हराम भएको चर्चा दुवै प्रहरी संगठन भित्र चल्न थालेको छ ।
प्रहरीमा बढुवा दरबन्दीको लर्को : १२ डिआइजी, १७ एसएसपी र ३० एसपी खाली
सरकारले अर्को व्यवस्था नगरेसम्म यतिबेला नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानीरिक्षक सहित १५ एआइजीहरूको दरवन्दी खाली भएको छ ।
निवर्तमान प्रहरी महानीरिक्षक (आइजीपी) प्रकाश अर्यालसहित सबै प्रहरी अतिरिक्त महानीरिक्षक (एआइजी) र केही प्रहरी नायव महानीरिक्षक (डिआइजी)हरूले अवकाश पाएपछि एआइजी र डिआईजीको दरवन्दी खाली भएको हो ।
सरकारले नयाँ आइजीपीमा सर्वेन्द्र खनाललाई बढुवा गरीसकेको छ । बढुवा र अवकाससँगै एआइजी र डिआइजीको दरवन्दी भने खाली भएको छ । २९ चैतदेखि नयाँ आइजीपी खनालले प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका छन् । प्रहरी नियमावली अनुसार २९ चैत २०४४बाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका सबै अधिकृतहरूले ३० बर्षे सेवा अवधिका कारण २८ चैतबाट अवकाश पाएका हुन् ।
एआइजीहरू जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी, रणबहादुर चन्द, कमलसिंह बम, माधव नेपाल, हेमन्त पाल, पशुपति उपाध्याय, देवेन्द्र सुवेदी, केशरीराज घिमिरे, माधव जोशी, विजयलाल कायस्थ, मधु पुडासैनी, पंकज श्रेष्ठ, मिङ्मार लामा, विजयराज भट्टले एआइजीबाट अवकाश पाए भने डिआइजीहरू भोगबहादुर थापा, गणेश केसी, केदारमानसिंह भण्डारी, रमेश भट्टराई, पुष्पचन्द्र रञ्जित, पुस्कलराज रेग्मी, सुवोध घिमिरेले अवकाश पाएका छन् ।
यसअघि २९ चैत २०४४ सालमा सेवा प्रवेश गरेका कृष्णप्रसाद गौतम, बलराम शर्मा पौडेल, विष्णुहरि गौतमले पनि एसएसपीबाट अवकाश पाइसकेका छन् । एक वर्ष अघि सोही समूहका यादवराज खनाल, लव विष्टले अवकाश पाइसकेका छन् ।
खाली रहेको दरबन्दीमा पनि समयमा बढुवा नहुँदा उच्च अधिकारीको वृत्तिविकासमा समस्या हुने देखिएको छ । यसले गर्दा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूमा समेत निराशा छाएको छ ।
२९ चैतमै नेपाल प्रहरीको २६ औं आइजीपीको रूपमा २९ माघ २०४६ मा सेवा प्रवेश गरेको समूहले कार्यभार सम्हाल्ने मौका पाउदा केही एसपीमा केही एसएसपी र केही डिआइजीमै थन्किएका छन् । यसपटक डीआईजीको रिक्त दरबन्दीमा बढुवा हँुदा एकैपटक तीनवटा ब्याच बढुवा हुन सक्छन् ।
२९ चैतपछि बढुवाको निर्णय हुने हो भने १२ जना एसएसपीले डीआईजी हुने अवसर पाउनेछन् । त्यस्तै १७ जना एसपी एसएसपी हुनेछन्, ३० डिएसपीहरू एसपीमा बढुवा हुनेछन् ।
एआइजीमा भने उत्तम कार्की, धिरू बस्नेत, ठूले राई मनोज न्यौपाने पुस्कर कार्की लगायतको दावी छ । तर सरकारले संघीय प्रहरी ऐन पास गरेपछि मात्रै एआइजीमा बढुवा गरेको खण्डमा तीन वटा मात्रै दरबन्दी कायम हुने देखिन्छ । डिआइजी रमेश खरेलको राजिनामापछि थप एक जनालाई एआइजीमा बढुवा गर्न सहज हुने भएको छ ।
उत्तम कार्कीको बढुवा रोकिने खतरा पनि बढेको छ । उनी आउने असारमै घर जाने भएकाले उनको बढुवा तत्काल रोकिने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अघिल्लो पटक डिआइजी हुनबाट छुटेका केदार रिजाल, पिताम्बर अधिकारी र दिनेश अमात्य डिआइजीमा बढुवा हुनेछन् ।
एसपीबाट एसएसपीमा बढुवाको लागि सहकुल बहादुर थापा, अरूणकुमार बिसी, विभूतिराज पाण्डे, दिलीपबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, प्रकाश अधिकारी, राजेन्द्र ढकाल, शरदकुमार खत्री, पूजा सिंह, सुशीलकुमार यादव, नरबहादुर खत्री, हरिराज वाग्ले, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्र कुमार बस्याल, शेखर कोइराला, मो. साउद आलम खाँ, किशोर कुमार दाहाल, भोजजंग शाह, मोहनकुमार आचार्य, देवबहादुर बोगटी, नलप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दराज आचार्य र विक्रमबहादुर चन्द बढुवा हुनेछन् ।
तस्तै डीएसपी बढुवामा दीपकराज खरेल, गंगा पन्त, सोमेन्द्रसिंह राठौर, मुकुन्द मरासिनी आभूषण तिम्सिना, बेलबहादुर पाण्डे अग्रस्थानमा छन् । यि डिएसपीले आफूलाई व्यवसायिक प्रहरी अधिकृतका रुपमा संगठनमा चिनाएका छन् ।
डिएसपी बढवामा भुपेन्द्र खत्री, शेखर खनाल, प्रवीण पोखरेल, विनोद सिलवाल, दीप शमशेर जबरा, रवीन्द्र रेग्मी, ओम अधिकारी, विश्व अधिकारी, रमेशकुमार बस्नेत, तारादेवी थापा, बसन्त रजौरे, भीमबहादुर दाहाल, सानुराम भट्टराई, अभिनारायण काप्mले, र रविकुमार पौडेल पनि एसपी बढुवाका बलिया दाबेदार हुन्, जनप्रहार उल्लेख छ ।
उनीहरूसँगै हीराबहादुर पाण्डे, श्यामकृष्ण अधिकारी, केदार खनाल, दिनेशराज मैनाली, वीरबहादुर ओली, गोपालचन्द्र भट्टराई, गोविन्द अधिकारी, सविन प्रधान लगायतको बढुवा हुनेछ ।
कविता : को ईमान्दार को भष्टाचारी ?
कांग्रेसमा गच्छदारका कार्यकर्ताको भविष्य के ?